सरकारी डिजिटल सुचनाको के भर गर्ने ? « Surya Khabar
सरकारी डिजिटल सुचनाको के भर गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारका डिजिटल सूचना कति सुरक्षित होलान् ? पक्कै पनि पूर्ण सुरक्षित नै हुनुपर्छ, राष्ट्रिय महत्वका सूचनाको व्यवस्थापन भएकै होला । यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकृत रमेश पोख्रेलले हाल सबै डाटाको ब्याकअप केन्द्रमै विभिन्न स्टोरेज डिभाइसमा गर्ने गरेको बताए। उनले यसरी विभिन्न डिभाइसमा केन्द्रमै राखिएका डाटा भने डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा राखिएको डाटासरह सुरक्षित नहुने उल्लेख गरे। सूचना अधिकृत पोख्रेलले क्लाउडमा डाटा राख्न त्यति सुरक्षित र भरपर्दो नहुनेहुँदा सरकारी डाटा क्लाउडमा नराखिएको बताए ।
हेटौँडामा निर्माणाधीन ब्याकअप सर्भर (डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर) अबको पाँचरछ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि हामी केन्द्रमा रहेको सर्भरको सम्पूर्ण डाटा निरन्तर ब्याकअप गछौँ सूचना अधिकृत पोख्रेलले भने। उनले हेटौँडाको डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टरलाई केन्द्रसँग जोड्न विद्युत् प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने जानकारी दिए। नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर निर्माणका लागि सम्झौता भएपश्चात् सरकारी डाटालाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न हेटौँडामा यो सेन्टर बन्न लागेको हो ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो प्रोजेक्टमध्येको यो प्रोजेक्टमा ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली करिब ४०.५ करोड) खर्च हुनेछ । यो डिजास्टरी रिकभरी सेन्टर लोड ब्यालेन्स सेन्टरका रूपमा समेत प्रयोग हुनेछ ।
कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट डाटा सुरक्षित राख्न मुख्य डाटा सेन्टरमा रहेका डिजिटल डाटाको निरन्तर ब्याकअप राख्न अन्य स्थानमा त्यस्तै क्षमताको डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर राख्ने गरिन्छ ।
यसरी राखिएको रिकभरी सेन्टरबाट मुख्य डाटा सेन्टरमा प्राविधिक समस्याका कारण वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला डाटा नष्ट भएमा तुरुन्तै यस्ता डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टरको प्रयोग हुने गर्दछ । यस्ता डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर आवश्यकता बमोजिम एक वा सो भन्दा बढी स्थानमा राख्ने गरिन्छ । मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।